Kaadị Azụmaahịa Pụrụ Iche ... er Chip | Martech Zone
N'ehihie a, enwere m nzukọ na nke anyị onye na-ahụ maka azụmaahịa Harry Howe na anyị ụlọ ọrụ mkpuchi azụmahịa, Joe Glaser. Ọ bụ nnukwu nzukọ n'ihi na Joe na Harry bụ nna ukwu na ịpịpụta nuances niile nke ihe egwu na mkpuchi na nzukọ dị nkenke ebe ha na-agwa m ihe m kwesịrị ịme ma atụkwasịrị m obi na ha ga-eme ya.
Anyị na-ebu mkpuchi maka ọtụtụ ebumnuche… ma ọ bụ ohi ohi ma ọ bụ mmebi, ị nweta akwụkwọ, mkpuchi njem, mkpuchi ndụ, wdg. N'eziokwu, ụfọdụ ndị ahịa ụlọ ọrụ anyị chọrọ ka anyị jide mkpuchi ego opekata mpe iji chebe ha abụọ ụlọ ọrụ ha na nke anyị. A obere azụmahịa anyị size nwere ike n'ụzọ dị mfe lie na otu na-egbu egbu swoop ma ọ bụrụ na anyị enweghị mkpuchi we ka anyị zere ihe ize ndụ na-akwụ ụgwọ kwa afọ.
Abụ m ezigbo onye na-ahụ kaadị azụmaahịa pụrụ iche na Joe wepụtara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ya kachasị ọhụrụ nke m chere na ọ bụ onye pụrụ iche na nke kwesịrị ịkpọtụ aha. Ọ bụ ezigbo egweri egosighị mmetụta na nkọwapụta nke ụlọ ọrụ n'otu akụkụ yana ozi kọntaktị Joe n'akụkụ nke ọzọ. A egweri egosighị ego poker maka onye na-akwụ ụgwọ mkpuchi… enweghị ọnụ!
PS: Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ ndị Indiana chọrọ ndụmọdụ siri ike, aga m akwado Joe Glaser na Thompson Otu. Nye ya oku na 317.514.7520.
Tags: kaadị azụmahịakaadị kaadị mgbawaahia ahiajoe glasermgbawa mgbawaìgwè thompson